Kyoto Animation အတွက် လှူဒါန်းလာတဲ့ အလှူငွေတွေကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ - JAPO Japanese News
ကြာ 28 Nov 2019, 14:42 ညနေ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၇ လပိုင်းတုန်းက Kyoto Animation ကုမ္ပဏီကို အမျိုးသားတစ်ယောက် လာရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အမှုကို မှတ်မိကြသေးလား?
ဝန်ထမ်းအယောက် ၆၉ ယောက်မှာ ၃၆ ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပါအဝင် ၃၄ ယောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတဲ့ ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးကို မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ နှမြောဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျန်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီ Kyoto Animation ကုမ္ပဏီကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Animation တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေဟာ ကမ္ဘာအတိုင်းအတာနဲ့ရှိပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ လူတွေဆီကနေ အလှူငွေ ယန်း ၂.၃ ဘီလီယံ ကောက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပိုက်ဆံတွေရှိနေရုံနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေက ပြန်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Animation လောကထဲကို တစ်စိုက်မတ်မတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလောက်ပမာဏအများကြီး ကောက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုတာက အံ့သြစရာပဲနော်။
ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Kyoto Animation ကို ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေ များတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်နော်။
နောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကလည်း တကယ်ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒီစုဆောင်းလို့ရလာခဲ့တဲ့ အလှူငွေတွေကို ကုမ္ပဏီပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့အတွက် လုံးဝအသုံးမပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
အားလုံးကို သေဆုံးသွားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့လူနာတွေအတွက် အပြည့်အဝ အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီသတင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မီဒီယာမှာ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေပြီး အထင်ကြီးလေးစားစရာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြန့်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ပြန်ထရမယ် …
စသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်မှာ ရေဗန်းစားလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီးခါစတုန်းက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံဗီဒီယိုဆိုဒ်တစ်ခုရဲ့ဂျပန်Animation catagorie မှာ တစ်နာရီအတွင်း လူကြည့်အများဆုံး မမေ့နိုင်စရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်လောက်အောင် နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များတဲ့ ဂျပန် Anime ဖြစ်တဲ့ Kyoto Animation ပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့ ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေအားလုံး မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Ghibli ရဲ့ animation တွေထဲမှာပါတဲ့နေရာတွေက အပြင်မှာတကယ်ရှိတယ် !!!?…
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာ စောစောအိပ်ရာဝင်လျှင် ဆံပင်ဖြူနှင့်အရေးအကြောင်းတွေပိုများလာမယ်ဆိုတာတကယ်လား ??